ललितपुरको नौवटै सिटमा कांग्रेस विजयी हुन्छ :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
शिवराम बानियाँ, ललितपुर ३ (ख) प्रदेशसभा उम्मेदवार, नेपाली कांग्रेस
० तपाईको चुनावी क्याम्पियन कस्तो भइरहेको छ ?
– हाम्रो चुनावी क्याम्पियन एकदमै राम्रो भएको छ । अहिले हामी घरदैलो कार्यक्रममा छौं । भोलि (आइतबार) घरदैलोको अन्तिम कार्यक्रम हुन्छ । त्यसपछि हामी मतदातासँग छलफल, भेटघाट, कोठे बैठक सुरु गर्छौं । घरदैलोबाट हामी निकै उत्साहित भएका छौं । हामी विजयी हुन्छौं ।
– हाम्रो प्रतिस्पर्धा वाम गठबन्धनसँग हुन्छ ।
० एमाले होइन ?
– वाम गठबन्धनसँग नै हुन्छ भनांै । गठबन्धनमा एमाले र माओवादी केन्द्र जो पनि हुन्छन् ।
० चुनाव जित्छौ भन्नुभयो, जित्ने आधार के के हुन् ?
– हामीले गरेको काम, ललितपुरका जनताले हामीलाई गरेको विश्वास नै कांग्रेसले चुनाव जित्ने पहिलो आधार हो । जनताले मलाई जुन किसिमले साथ र सहयोग गर्नुभएको छ, त्यो हिसाबले भन्नुपर्दा मैले चुनाव जित्छु । जनताको काम गर्नेलाई नै जनताले विजयी बनाउँछन् ।
० लतिलपुर ३ का जनताले तपाईलाई भोट दिनुपर्ने कारण के हो त ?
– मलाई भोट दिनुपर्ने कारण धेरै छ । यहाँको विकास निर्माणको पूर्वाधारहरू मैले नै खडा गरेको हुँ । म तत्कालीन गाउँ विकास समितिको पूर्वअध्यक्ष पनि हुँ । मैले नै विकासको एजेन्डा र जनजीविकाको सवाल उठाएको हुँ । यहाँका जनतालाई शिवराम राम्रो मान्छे हो, असल मान्छे हो, हाम्रो सेवा गर्छ, पहिलेदेखि नै हाम्रो काम गर्दै आएको छ भन्ने विश्वास छ । आमजनताको विश्वास पूरा गर्नकै लागि उम्मेदवार बनेको हुँ । जसका कारण मतदाताले मलाई मत दिनु हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ ।
० तपाईका एजेन्डा के के छन् ?
– मेरा थुप्रै एजेन्डा छन् । हामीले हाम्रो एजेन्डा कांग्रेसको घोषणापत्रमा पनि उल्लेख गरेका छांै । यहाँको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको खानोपानीको हो । पानीको समस्या सामधान गर्ने हामीले एजेन्डा बनाएका छौं । यसैगरी, बाटोघाटोको समस्या देखिएको छ । बेरोजगारीको समस्या पनि छ । खोकनाबाट आउने फास्ट ट्रयाकको जग्गाको मुआब्जा पुगेन भन्ने कुरा पनि आएको छ ।
अर्को पुनर्निर्माणको समस्या छ । छाप्रो, टहरामा बसेका जनतालाई घरमा फर्काउने हाम्रो एजेन्डा हो । यसैगरी, बागमती कोरिडोर, नख्खु खोला करिडोर निर्माण गरेर टीकाभैरवसम्म पु¥याउने हामीले लक्ष्य राखेका छौं । ललितपुर महानगरपालिकालाई हराभरा, सुन्दर, स्वच्छ बनाउने हाम्रो योजना छ । यी कुरा लिएर अहिले म जनताको माझमा गएको छु ।
० तपाईका प्रतिस्पर्धी दुई दल एमाले र माओवादी अहिले मिलेका छन्, यसले अप्ठ्यारो परेको छ कि छैन ?
– वाम गठबन्धनले मलाई खासै असर गरेको छैन । यिनीहरूको गठबन्धन पहिले नै हो । उनीहरू बीचमा फुटेर फेरि जोडिएका मात्र हुन् । गाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा चुनाव लड्दा नै मैले एमाले र माओवादीको सामना गरेकोे हुँ । त्यसैले यो मेरा लागि त्यति नौलो कुरा होइन । मैले जनताको सेवा गरेकाले उनीहरूले मलाई यो हाम्रो सेवक हो भन्ने ठानेर भोट दिनुहुने छ भन्नेमा म ढुक्क छु । मैले यसअघि २०४९ देखि २०५४ सम्म सैंवु गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष भएर जनताको सेवा गरिसकेको छु । यसपटक पनि जनताले मलाई जिताउँछन् भन्नेमा म ढुक्क छु । मैले निरन्तर जनताको सेवा गर्दै आएको छु । त्यसैले मलाई जनताले अघिल्लो पटक भन्दा यसपटक अत्यधिक भोटले जिताउने छन् भन्नेमा म ढुक्क छु ।
० ललितपुरका तीनवटा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका ६ सिटमा कांग्रेसले कति सिट ल्याउला ?
– ललितपुरका प्रदेशसभाका ६ वटै क्षेत्रमा हामी विजयी हुन्छौं । ललितपुरमा परिवर्तन गराउन हाम्रो ठूलो योगदान छ । परिवर्तनकारी ललितपुर भन्ने हाम्रो नारा नै हो । त्यसमा धेरै कुरा समेट्नुपर्ने छ । ती कुरा समेट्ने हाम्रा एजेन्डा छन् । त्यसैले ललितपुरका प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरी नौवटै सिटमा जनताले हामीलाई विजयी गराउने छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
० गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ललितपुर महानगरपालिकाको २५ नम्बर वडामा एमालेले जितेको होइन र ?
– थोरै भोटको फरकले एमालेले जितेको हो । त्यो परिणामले अहिले केही फरक पर्दैन । किनभने त्यो चुनाव र यो चुनाव फरक छ । त्यो वडाको चुनाव थियो, यो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हो । एउटा परिस्थितिमा त्यसबेला वडाध्यक्षमा उम्मेदवार भएँ । तर, मेयर र उपमेयरमा हामी विजयी भयौं । तर अहिले शिवराम बानियाँ प्रदेशसभाको उम्मेदवार भएका बेला जनताले त्यतातिर फर्केर हेर्दैनन् । कसरी हुन्छ, शिवराम बानियाँलाई जिताउने भन्ने जनताको चाहना छ, त्यसैले म विजयी हुन्छु ।
Tarun Khabar0response सोमबार,१८ मंशिर २०७४ 598 Views